Qabsashadda Taliban ee Af-ghanistan maxaa ka dhalan kara? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Qabsashadda Taliban ee Af-ghanistan maxaa ka dhalan kara?
Sidda ka dhacday waddamo badan oo jabhado qabsadeen, sidda South Sudan, waxay keentaa in kuwa xukunka gacanta ku dhiga ay ku kala qaybsamaan maamulida waddanka – taasina waxay keentaa jah-wareer siyaasadeed oo in xal laga gaadhaa ay adkaato.
Waxa aad isha loogu hayn doonaa sidda ay xukunka ugu heshiiyaan hoggaamiyaasha Taliban oo dhexdooda dhawr jeer ku hirdamay hoggaaminta ugu saraysa ururka. Rag badan oo isku awooda ayaa dhex jira ururka oo iyaga laftooda hirdan maamul ka dhaxeeyo.
Su’aalaha iswaydiinta muddan waxa kamida; Taliban haddii xukunka lagu wareejiyo ma laga yaabaa inay xidhiidho la sameeyaan waddamada reer Galbeedka?. Xukunka ma ka qayb-galin doonaan dadkii dawladda lasoo shaqeeyay?.
Ururka Taalibaan haddii ay xukunka si rasmiya ula wareegaan waxa la is waydiinayaa taageero ma u fidin karaan ururada lamidka ah ee ka dagaalama Afrika.
Waxaa qoray:- Zakaria Ahmed.
Previous articleWax kabaro Cuntoooyinka nadiifiya Beerka. iyo dhibaatada dufanka badan .
Next articleHUBKA CASRIGA AH EE AY DALIBAAN HESHAY, ARAGTIDOODA XUQUUQDA AADANAHA IYO TRUMP OO KU BAAQAY IN BIDEN UU IS CASILO=====
warbixintii ugu danbeysa COVID19 itoobiya
Gabadhii ka duubtey muuqalka dilkii George Floyd oo ka warantey